Vietjet na-ebupụta ụgbọ elu ọhụrụ Seoul, Taipei, Nagoya, Fukuoka na Kagoshima
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ndi akuko » Vietjet na-ebupụta ụgbọ elu ọhụrụ Seoul, Taipei, Nagoya, Fukuoka na Kagoshima
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa ozi Japan • News • Ndi akuko • Akụkọ South Korea na -agbasa • Akụkọ na -agbasa Taiwan • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche • Akụkọ na -agbasa Vietnam
Vietjet amalitela afọ ọhụrụ na ndọtị na-aga n'ihu site na mgbasawanye nke mba ụwa na mba atọ Eshia iji nye ohere iji ụgbọ elu na-akwụ ụgwọ na ego na-agbanwe agbanwe yana ọrụ dị iche iche iji mezuo ihe ndị ahịa chọrọ.
Ọrụ mba abụọ mbụ jikọtara Can Tho, bụ isi obodo Mekong Delta na Taipei na Seoul, bụ isi obodo Taiwan na South Korea ka e hiwere na 12 Jenụwarị. Iji mee ememme ncheta a, Vietjet nyekwara ego maka ego maka ndị ogbenye Can Tho City iji mee ka ndị ọ na-enweghị ka ọ ha mee ememme Tet na-ekpo ọkụ ma nwee ịhụnanya.
Na-abịa na Nwere ike tho ọdụ ụgbọ elu mba ụwa bụ Onye isi ala nke Vietnam Fatherland Front Central Kọmitii Tran Thanh Man; Onye isi oche nke Kọmitii Ndị Mmadụ nke Can Tho City Le Quang Manh; Onye isi njikwa Vietnamjet Luu Duc Khanh; Onye osote onye isi ala Vietjet bụ Do Xuan Quang na ndị isi ndị ọzọ sitere na metụtara ndị Minista, Ngalaba na ndị isi yana ndị njem na mpaghara Mekong Delta.
Canzọ Can Tho - Taipei bidoro na 10 Jenụwarị 2020 na-arụ ọrụ ụgbọ elu nloghachi anọ kwa izu yana ụzọ Can Tho - Seoul (Incheon) ga-arụ ọrụ njem nlọghachi ugboro atọ kwa izu malite na 16 Jenụwarị 2020.
Nwe obodo bụ ugbu a ụgbọelu na-arụ ọrụ ọtụtụ ụzọ na ụgbọ elu na Can Tho International Airport nwere ụzọ ụlọ asaa na ụzọ ụwa abụọ. Kemgbe ụgbọ elu mbụ rụrụ na 2014, Vietjet enyela aka n'ụzọ dị ịrịba ama na mgbanwe Can Can, na -emepụta nkezi uto nke 30 pasent maka ọnụ ọgụgụ ndị njem nleta kwa afọ.
Dịka akụkụ nke mgbasawanye ngwangwa netwọkụ ya, Vietjet kwupụtakwara ụzọ ọhụrụ ise na-ejikọ Hanoi, Da Nang na Ho Chi Minh City na Nagoya, Fukuoka na Kagoshima na Japan ịmalite na 2020. Mmụba nke ọnụ ọgụgụ nke ụzọ okporo ụzọ kpọmkwem na 10 n'etiti Vietnam na Japan ga - enyere Vietnam aka ịbawanye ebumnuche ya iji dọta otu nde ndị njem nleta Japan na afọ a.
Ememe ọkwa ọkwa ahụ mere na 13 Jenụwarị n'ime usoro Japan - Vietnam Bilateral Tourism Promotion Conference, nke nabatara ihe karịrị ndị nnọchi anya 1,000 si Japan, gụnyere ndị isi si National Assembly Japan, gọọmentị Japan na ndị isi sitere na nnukwu ụlọ ọrụ Japan. Ndị nọ na ya bụ ndị osote onye isi ala nke Vietnam - Vuong Dinh Hue na onye odeakwụkwọ ukwu nke Liberal Democratic Party nke Japan yana Onye isi oche nke ndị omeiwu ndị omeiwu Japan-Vietnamese - Nikai Toshihiro.
Mgbe ihe ịga nke ọma nke ọtụtụ ụzọ jikọtara isi obodo, akụ na ụba na nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke mba abụọ ahụ, ụzọ ọhụrụ Vietnamjet na Japan ga-emepe ahịa tiketi na ịmalite ọrụ n'ime 2020. Mgbe Tokyo na Osaka, Nagoya na Fukuoka bụ nke atọ na obodo nke anọ kachasị na Japan. N'aka nke ọzọ, Kagoshima nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị Vietnamese.
Flightsgbọ elu ọhụrụ ndị a ga-enyere aka n'iwulite mmekọrịta mmekọrịta mmekọrịta n'etiti Vietnam na Japan ma na-akwalite mgbanwe mmekọrịta ọdịbendị na nke akụ na ụba na mba abụọ ahụ. Ka ọ dị ugbu a ọrụ abụọ ahụ jikọtara Can Tho na Taipei na Seoul ga-emeghe ụzọ maka ndị obodo, ndị njem nleta na njem site na ọdụ ụgbọ elu dị mma, nke oge a ma n'otu oge ahụ na-akwalite agụụ nke njem, azụmahịa, ịmụ akwụkwọ na mba ofesi, si otú a na-enyekwu ohere iji chọpụta ebe nkiri na ebe aga.
agbasa ozi ọma Ntughari